Mabhuku akanakisa echikadzi munhoroondo | Zvazvino Zvinyorwa
Alberto Makumbo | | Vanyori, Type, Novela
Musi waMarch 8, 2018 zvaive Zuva Revanhukadzi Zuva, asi kwete imwezve. Zuva rakaunza pamwechete vakadzi vese vepasirose mukutsvaga kuenzana iyo, kunyangwe ichisvika, ichiri kutambura mune zvakawanda zvinhu nekodzero. Izvi zvinotevera mabhuku akanakisa echikadzi joina iyo chikonzero kuti uwane huru uye dzakashinga nyaya.
1 Mabhuku akanakisa echikadzi munhoroondo
1.1 Nyaya yaMhandara naMargaret Atwood
1.2 Imba Yako Iwe, naVirginia Woolf
1.3 Iyo Ruvara Purple naAlice Walker
1.4 Isu tese tinofanira kuve vakadzi, naChimamanda Ngozi Adichie
1.5 Bonde reChipiri, naSimone de Beauvoir
1.6 Iyo Bell Jar, naSylvia Plath
1.7 Iwo mamonologu emukadzi, naEve Ensler
1.8 Jane Eyre, naCharlotte Brontë
1.9 Nhema Yekunaka, naNaomi Wolf
1.10 Kuzvikudza uye Kusarura, naJane Austen
Mabhuku akanakisa echikadzi munhoroondo
Nyaya yaMhandara naMargaret Atwood
Kutenda kune yakakurudzirwa Hulu akateedzera nyeredzi Elizabeth moss, nyika yakawanazve imwe ye makuru echikadzi uye edystopi mabhuku emakumi emakore apfuura. Yakaburitswa muna 1985 kusvika mukubudirira kukuru uye kwakanyanya kutengesa, Nyaya yaMhandara, naCanada Margaret Atwood, zvinotitora isu kuenda mune ramangwana umo kushaya mbereko kunotungamira nzanga yechisimba kushandisa vakadzi sevaranda kupfuudzira hupenyu hwevanhu. Ganda uye rakaomarara, inovelisi rave chiratidzo cheiyo feminist wave.
Imba Yako Iwe, naVirginia Woolf
Virginia Woolf yakanga iri imwe ye vanyori vekutanga kudzivirira musangano wechikadzi mumakore gumi akafanana nema20s umo kodzero yevakadzi yekuvhota muEngland yaizounza shanduko inotsigirwa nemabasa senge Kamuri Yekunyora. Iyo rondedzero, inoumbwa nehurukuro dzakasiyana dzakapihwa naWoolf mukupera kwa1928 kuCambridge University, vanotsigira rusununguko uye hupfumi kuzvimiririra kwevakadzi kuitira kuti akwanise kuzvizadzisa uye ave nenguva yekukudziridza hunyanzvi.
Iyo Ruvara Purple naAlice Walker
Yakashandurwa muna 1985 naSteven Spielberg mune yakakurumbira bhaisikopo yainzi Whoopi Goldberg, Ruvara rwepepuru inotsigira rusununguko rwevaranda nevakadzi zvakafanana. Yakagadzwa mukutanga kwezana ramakore rechimakumi maviri, iyo nhoroondo inoteera mumakwara aCelie, mukadzi wechidiki anova nepamuviri nababa vake uye anotengeswa kumurume anomushungurudza panyama uye nepfungwa, achimuchengeta akaparadzaniswa nehanzvadzi yake. Nyaya yaAlice Walker yakakunda iyo Pulitzer Mubairo muna 1983, ichiita munyori wayo mumwe wemamishinari makuru ema tsamba echikadzi mumakore achangopfuura.
Isu tese tinofanira kuve vakadzi, naChimamanda Ngozi Adichie
Munguva TED Talk kuti Nigerian Ngozi Adichie akaungana muna 2013, tsananguro yehukadzi yakachinja zvachose. Uchapupu hwakaunganidzwa mwedzi yakazotevera mukati Isu tese tinofanira kuva vakadzi, chinyorwa chipfupi uye chine mutsindo umo munyori wemabasa akadai seAmericanah anotiudza nezvake chiratidzo chake chekuenzana, imwe iyo murume kana murume asingashoreke uye mukadzi anokwanisa kuramba aine kodzero dzakaenzana nemurume akapfeka zvitsitsinho zvavo zvakanakisa. Rimwe remabhuku akanakisa echikadzi emakore apfuura.
Ungada here kuverenga Tese tinofanira kuva feminists?
Bonde reChipiri, naSimone de Beauvoir
Mushure mekuburitswa kwayo muna 1949, rondedzero iyi yakave yakabudirira, ichidarika seimwe yeiyo mabhuku feminism bheji. Mumapeji aro ese, Simone de Beauvoir anoratidza nezvehunhu hwevakadzi uye nemufananidzo wavo wazvino unozvarwa kubva mukufungidzirwa kwawo pamberi penzanga. Nheyo yakakwana yekuongorora iyo misiyano pakati pevarume nevakadzi, kukurudzira vekupedzisira kuti vadzore maitiro avo uye vagova mhando yemunhu wavakamboda.
Lee Bonde rechipiri.
Iyo Bell Jar, naSylvia Plath
Iyo yega rondedzero yemunyori weAmerica Sylvia Plath Yakavhurwa muUK svondo pamberi pekuzviuraya kwemunyori mushure mekubatidza gasi mukicheni yake. Iyo nyaya umo protagonist yayo, Esther, ndiye mukadzi wechidiki anozivikanwa pachikoro chepamusoro uye shanje dzevasikana vese, achiona ramangwana rake richiderera mukutsvaga sarudzo dzaasina kukwanisa kuita uye kune hukama hwake husina kunaka nevarume vanozvitutumadza uye vanofunga zvisizvo. Hunhu hwepfungwa hwe protagonist hwaive, dzimwe nguva, uchienzaniswa nemunyori akabatwa nebipolarity uye kusuwa, tichisiya seuchapupu semi-autobiography iyo yaizoenda pasi kune ramangwana.
Tsvaga Sylvia Plath bhero bhero.
Iwo mamonologu emukadzi, naEve Ensler
Muna 1996, munyori Eve Ensler akatanga kutaura neshamwari dzake izvo zvakatungamira kuchikamu chenyaya dzenyaya dzaaizobhabhatidza seIvo monologues yemukadzi. Mutambo, uyo unonyora mazwi emamonologue e "akatsamwa" uye "akarova mbichana" yakashandisirwa kuimba yemitambo uye ikave budiriro muna 2001 mushure mekuita kwayo kuMadison Square Garden nevatambi vakaita saMambokadzi Latifah, Winona Ryder naMarisa. Tomei, achisunungura zvinotevera mabasa mune mimwe mitauro munyika dzakasiyana dzepasi.
Jane Eyre, naCharlotte Brontë
Nguva pfupi Jane Eyre asati aburitswa muna 1847, Charlotte Charlotte akasarudza kushandisa pseudonym Currer Bell Mune imwe nguva kuve munyori kwanga kusingatariswe zvakanyanya. Maitiro ebasa rake aizochinja kana iro basa rikave rinotengesa zvakanyanya. Yechimiro chehupenyu, Jane eyre inotaurira hupenyu hwemukadzi wechidiki uyo, mushure mekupfuura nedzimba dzakasiyana nherera nematambudziko, anova mutariri wemwanasikana wechienzi VaRochester. Basa racho rinoonekwa seimwe ye enganonyorwa dzekutanga dzevakadzi munhoroondo.
Nhema Yekunaka, naNaomi Wolf
Inofungidzirwa nevazhinji kuve imwe ye zvinyorwa zvakakosha zvekunzwisisa hukadzi, Bhuku raWolf rakaburitswa muna1990 rakavhura gakava nyowani pamusoro pemhedzisiro yekumisikidzwa kwevakadzi: chimiro chavo. Munyika mune kusagadzikana kwekudya uye epurasitiki oparesheni ari kuwedzera, Wolf inoongorora mufananidzo we mukadzi anobata kune zvisina basa zvinorayirwa nenzanga pachayo uye kutaurirana kukuru.
Tinokurudzira runako Ngano.
Yakabudiswa muna 1813 zvisingazivikanwi, Kuzvikudza uye kufungira zvisizvo inotiratidza nemamiriro ezvinhu evamwe hanzvadzi veBennet vanoshuvira kuve vemurume anovatsigira. Zvese kunze kweumwe: Elizabeth Bennet, mukadzi wechidiki uyo anofarira kuongorora zvido zvake pane kuroora. Dambudziko rinouya apo VaDarcy, mumwe wevanhu vakapfuma kwazvo munzvimbo iyi, paanodyara kupesana kwakawanda mu protagonist akatenderedza chimiro chake. Yakasarudzika, ingori inonaka seye 2005 dhizaini inoenderana naKeira Knightley.
Ndeapi mabhuku akanakisa echikadzi awakaverenga?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Mabhuku akanakisa echikadzi akambo
BEATRIZ FERNANDEZ akadaro
Ndakaverenga "Nyika yeVakadzi" uye "Mukadzi Anogaramo", zvese naGioconda Belli, munyori weNicaragua. Alice Munro anonyorawo zvakawanda nezvevakadzi.
Pindura kuna BEATRIZ FERNANDEZ
Ngirozi Navarro Pardiñas akadaro
Agnes Grey, rakanyorwa naAnn Bronte
Pindura Mutumwa Navarro Pardiñas